राष्ट्रपतिलाई १६ करोडको कार र कमेडी सर्कसका हाम्रा प्रधानमन्त्री- पेशल आचार्य-Brtnepal.com
अब भने नेपाली राजनीतिक नेताहरू नेता कम र लेता बढी देखिन थाले । हिन्दी भाषामा एउटा वडा गजबको भनाइ छ, नेताका बारे –‘नेता सब कुछ लेता, मगर कुछ नही देता ।’ आलङ्करिक राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान महामहिम विद्यादेवी भण्डारीलाई आफूले चढेको कारले नपुगेर १६ करोडको कार चढ्ने फूर्ति गर्नु प¥यो । उनले सरकारसँग ठाडै माग गरेकी छन् । क्या अचम्म ! जनता भूकम्पको दोस्रो किस्ता ऋण नपाएर फाटेको पालमुनि बर्खा काट्न बाध्य छन् । मुङ्लिनको ३४ किलोमिटर बाटो पार गर्न सवारी साधनलाई ४÷४ घण्टा लाग्छ । बाटो कहिले बनी सक्ने हो त्यो थाहापत्तो छैन । मेलाम्ची खानेपानीको सपनाले राजधानीबासीलाई ‘राजनीतिक ब्लाकमेलिङ्’ गर्न थालेको बिस वर्षभन्दा बढी भयो । गणतन्त्र ल्याउने पहिलो पुस्ता मेलाम्चीमेलाम्ची भन्दै माटिए । अझै पानी आउने पत्तो फाँट छैन । पदासिन भए भन्दैमा देशले नथेग्ने सुविधाहरू माग्न तपार्इंहरू जस्तालाई अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो । हैन ।
तर नेपालमा त्यो लाज भनेको जिनिश ठुला र पदासिन नेतालाई भएको भए आजका दिनमा यो मुलुकको हविगत यस्तो हुने थिएन । जानकारहरूका शब्दमा त्यतिको महँगो कार चीनका राष्ट्रपति जी सिन पिङ् र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चढ्ने भन्दा महँगो हो । गरिब देशका नेताको स्वाँङै बढी । यस्तै अवस्थालाई हेरेर हाम्रा पुर्खाहरूले ‘भाङ्गाको टोपीलाई गुहेँलाको फुल’ उखानको अभिर्भाव गरेका होलान् कठै ! अझ देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । सात सातवटा प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकार अनि देशभरिका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सेवा सुविधालाई हाम्रो जस्तो देशले कतिन्जेल थेग्न सक्छ या सक्दैन त्यो कहिले गहिरिएर विश्लेषण गर्नु भएको छ ? के देश तपाईँले शुभविवाहमा दाइजोमा पाएको हो ? व्यवस्था तपाईँको पेवा हो ? नागरिकका हैसियतले देशका जुनसुकै दूरदराजमा रहेभएका जनताले यो प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? थाहा पाइराख्नुस् जिम्बाबेका राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको सरकारले दिएको सरकारी आवासमा नबसेर उनी आफ्नै साने झुप्रोमा बस्छन् ।
संसारले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘एक नम्बरको जोकर’, सन्काहा र हावा राष्ट्रपति मान्दछ तर अब त्यो विशेषण र आफ्नै देशका राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्टापाल्टा र अन्टसन्ट विशेषताहरू देखाउन थालेपछि यहाँ सरेको छ । हिन्दीको कमेडी सर्कस अब दर्शकहरूले नहेरे पनि भयो । देशकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जोक गरेपछि हालैको बीबीसी साझा सवालमा सहभागीहरूले प्रश्न सोध्दा देखाएको कार्यकारीको रबैया र सप्तरीका बाढीपीडितहरू सामु प्रमले राहतको प्याकेज घोषणा गर्दा गरेको भाषणले देउवामा समेत देश, सिस्टम र संवेदनाका पक्षमा सामान्य ज्ञान समेत नभएको देखियो । कति हाँस्नु जनता त हाँसेरै मर्ने भए बा ?
गर्मीको सिजन छ । राजधानीका बाटा घाटाहरू हिलो पानीले हिलाम्मे बनेका छन् । बाल, वृद्ध र वनिता जुनसुकै बेला अस्पताल जानु पर्ने भएको छ । अलि अघि धूलोले सडकमा दिउँसै बत्ती बाल्नु पर्ने हुन्थ्यो अब मेलाम्ची नानीले आफ्ना पाएपका हाँगा बिच्छाउने निहूँमा सडक एक किसिमको धान रोप्ने खेत र पोखरीझैँ बनेको छ । अस्पताल जाऊँ भने पनि जनता हिँस्रक अस्पतालबाट तर्सने थाले । मनमोहनका सुनाममा खोलिएको अस्पतालमा पत्थरीको बिरामीलाई अप्रेसन गर्ने निहूँमा किडनी नै झिकेर फालिएको समाचार आयो । मेडिकल शिक्षाको माफियागिरी विरुद्धमा नानीदेखिको बल लगाएर अनसन बस्ने डा. गोविन्द केसी मृगौलाजस्तो शरीरको अत्यावश्यक अङ्ग नै अस्पतालले झिकेर फालिदिँदा चुप लाग्नुको अर्थ खोजिँदैछ –यतिखेर ।
उता एमालेकै जुझारु नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले एक जना दुर्गमका शिक्षकलाई फेसबुकमा स्टाटस राखेको निहूँमा खुट्टा भाँचिदिने ऐलान गरिछन् । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा एमालेले बहुमत प्राप्त गरेको खुसीयालीमा एमालेका नेताहरूको फूर्तिफार्ति बढेको हो कि ? अचेल जनताहरू बाहिरफेर चियागफमा यस्तै प्रसङ्ग झिकेर कुरा गर्न थालेका छन् ।
यो मुलुकको हविगत देख्दा सरकार लुटेराको भेषमा देखिएको छ । सरकारी रबैया र तिनका आसेपासेहरू दोस्रा र तेस्रा निरोका अवतारका रूपमा भटाभट् देखिएका छन् । जनताले आफ्नो छनोटमा भए गरेका बद्मासभन्दा ‘कम बद्मास’ छान्नै पर्ने स्थितिको अन्त्य जबसम्म चुनावी प्रक्रियामा हुँदैन तबसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन । अब हुने प्रदेश र सङ्घका चुनावमा ‘नो भोटिङ्’ को अनिवार्य व्यवस्था मतपत्रमा गरिनै पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखियो । अहिले चुनावमा चुनिएर आएका र अबका दस वर्षसम्म चुनावमा आउन सक्ने सबै प्रमुख र ससाना पार्टीका नेता (लेता ?) का अनुहारको व्यतिरेकी विश्लेषण गर्ने हो भने पनि घुमिफिरी पश्च चिन्तनका गरिब साथै नयाँ सुझ एवम् सोच नभएका नेतालाई छान्नुको कुनै विकल्प हामी जनतासँग छैन । त्यसो भन्दैमा नयाँ कुराका लागि खबरदारी गर्न पनि छाड्नु हुन्न ।
रहँदा बस्दा ठुलो हुँदै गएको दल एमालेबाट बामदेव गौतम, सुवास नेमाङ्ग र ईश्वर कोइराला, काँग्रेसबाट उपद्रो तल झरेर प्रमको खोजी गरियो भने क्रमशः रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइराला, डा.सशाङ्क कोइराला र डा. रामशरण महतहरूले नै गणतान्त्रिक प्रममा धोती फेर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रमा भने अझै प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रम भएर ‘ह्याट्रिक’ गरे भने अन्यथा नलिए हुन्छ । राजनीतिको समर सकिएको हो । अब विकासे राजनीतिका लागि स्थानीय निकायको चुनाव पनि हुँदैछ । त्यो सकिएपछि पनि अझै जनतालाई के इस्सुमा झुक्याउने भन्ने सकुनी सोचमा पार्टीका नेताहरू लागिरहेका छन् । संविधान संशोधनको ‘हगे हग मुते काट्छु’ जस्तो मधेशवादी र एमालेको रोइलोले देशलाई पक्कै पनि जातीय र क्षेत्रीय दंगामा नलैजाला भन्न सकिन्नँ । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसी भन्छन् –‘मुलुक अब जाने भनकै जातीय र क्षेत्रीय मुद्दामा हो । एकपछि अर्को गर्दै यहाँ कृत्रिम सङ्घर्षका सुनामीहरू मच्चाउने गोटी चालिँदै गरिएको बुझिन्छ ।’ एउटा सानो स्कुले बच्चाले पनि हाम्रा नेताका तीन न तेह्रका पाङ्दुरे कुरा पत्याउने मुडमा छैन ।
देश हाँक्न भिजन, मिसन र गोल चाहिन्छ । अहिलेका नेताहरूमा अप्रिय निर्णय लिएरै सही त्यस्तो किसिमको भिजन भएको भेउ जनताले पाउन सकेका छैनन् । चिनियाँहरू नेपाललाई सुनखानीमा सुतिरहेको देश ‘स्लिपिङ् ओभर अ गोल्ड माइन’ भन्छन् । नेपाली नेताहरूलाई त्यसको हेक्कै छैन । या बुझेर बुझ पचाइरहेका छन् । वास्तवमा साझा सवालमा त्यो युवा जसले सिङ्गापुरको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न राख्यो त्यो औशत नेपाली युवाप्रश्न र आक्रोश हो । यहाँ आफू चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुको महत्त्व शेरबहादुरले नेपाली चुस्तदुरुस्त र प्रविधिमा अपडेट युवापुस्तालाई बुझाउन सक्दैनन् कारण उनीसँग त्यस्तो गतिलो सूत्र छैन, जसले देश बनाउन सकियोस् । उनी विकासका संवाहक सूत्राधार पनि होइनन् । उनको ऊर्जा तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदै देखी भोगिएको हो । त्यो युवा जसले प्रधानमन्त्रीलाई लल्कार्यो उसले हान्स एन्डरसनको इम्पेरियर न्यू क्लोथलाई पुनः नेपाली परिवेशमा सम्झाउने काम गरेको छ । अहिलेको बादशाह (?)जो आफूलाई इलेक्टेड भन्छ त्यो राज्य सञ्चालनका मामलामा जताततै चुकेको छ । केही समयअघि प्रहरी महानिरीक्षक चयनको मामलामा चुक्यो । प्रधानन्यायाधीशलाई बेला न कुबेला महाभियोग लगाउने मामलामा चुक्यो । जनता अहिले १७ सालका, ४६ सालका र ६२ सालका मानसिकतामा छैनन् । जतिजति नेताहरू आफूलाई देखे जानेको छु भन्दैछन् ती भन्दा नेपाली जनता दिन दुगुना रात चौगुना बाठा भैरहेका छन् । मिडिया क्रान्ति र खुलापनले मानिसलाई क्षणपलमा विश्वको जानकारी दिन्छ । माझी औंला र चोरी औंलाले स्मार्ट फोनमा आएका हजारौँ र लाखौँ जानकारीलाई दिमागी एप्समा सेभ गर्ने क्वालिटी भएका जनतासँग केकसरी व्यवहार गर्नु पर्छ ? केकसरी डिल गर्नु पर्छ भन्ने पनि हाम्रा नेतालाई थाहा रै’नछ । साझा सवाल हेरेपछि त्यो कुराको एहसास भएको छ । नेपाली नागरिक हुनुका नाताले म कस्तो देशको प्रधानमन्त्रीबाट शासित भइरहेको रहेछु भन्ने एङ्गलको सोचले कुरीकुरी लागेको छ ।
अझ सप्तरीको घटनाले त देउवाको बेसुद्धिलाई अझ घिउ थप्ने काम गरेको छ । लोक कथामा ‘बालविवाह गरेर घर आफ्नो गएकी सानी बाल पात्राले जेठाजु अघिल्तिर आउँदा आफ्नो घाँघरले केस ढाक्दा मुन्तिरको ‘सु’ देखिएको प्रसङ्ग’ यहाँ साझा सवाल र सप्तरी घटनाले उजागर गरेको देखियो । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ नेपाली काँग्रेसको सभापति र काँग्रेसको मात्र प्रम हुनु हुन्न । तपाईँ त स्वतन्त्र गणतान्त्रिक देश नेपाल र ३ करोड नेपालीको समेत साझा प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ । तपाईँका काँधमा केवल तपाईँले भन्नु भएझैँ प्रदेश सभा र सङ्घ चुनावको दायित्व मात्र छैन । नेपालका दस, बिस, तीस र पचास वर्षका भिजन, मिसन र गोल गर्ने जिम्मेवारी र विश्वासहरू पनि छन् । आखिर इतिहासमा लामो समय तपाईँले बोल्नकै लागि पञ्चायतसँग गर्नु भएको सङ्घर्ष यो आजको दिन ल्याउनमा लगाउनु भएको छ । हिजो तपाईँ बोल्न खोज्नु हुन्थ्यो पञ्चायत तपाईँलाई ‘बढ्ता नबोल’ भन्थ्यो । आज सम्पन्नता र विकासका लागि युवापुस्ता जानकारी लिन बोल्न खोज्छ प्रत्युत्तरमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ –‘तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनु हुन्छ ।’ यदि तपाईँ गणतन्त्रको पक्षपाती प्रम हो र जनताको बोल्ने अधिकारका लागि विगत्मा साँच्चै लड्नु भएको हो भने आज युवा पुस्तालाई प्रतिप्रश्न गर्ने साहस कसरी आयो ? उत्तर सबै युवा चाहन्छन् । प्रश्न गर्ने संस्कार नै प्रजातन्त्र र अझ गणतन्त्रका गहना हुन । हुन्छन् । हामी जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार राज्यले खोस्दै ‘तँ चुप लाग्’ भन्ने हो भने एकदलीय तानाशाही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था नै ठिक हुन्थ्यो । पत्रपत्रिका पढ्नु हुन्छ र अनलाइन हेर्नु हुन्छ भने आज तपाईँलाई विदुषक बनाएर मिडियाहरू भाइरल भैरहेका छन् । कृपया हेक्का राख्नुस् प्रमज्यू, ‘थुतुनो र मुतुनो बचाउनु पर्छ’ पुर्खाले त्यसै कहाँ भनेका हुन् र ? नत्र जत्रोसुकै बादशाह पनि जनताका नजरमा एक पटक नाङ्गो भैसकेपछि उसको शाख फिर्ता हुन्न ।
रूखो र अप्रिय शब्द बोल्ने हो भने तपाईँलाई जनताले छिमेकी मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पसँग सधैँ तुलना पनि गरिरहँदैनन् । बिहारकै पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवसँग पनि तुलना गरेर हेर्ने छन् –नेपाली जनताले । गम्नुस् । शान्त चित्तले एकान्तमा गम खानुस् युवा आक्रोशमा विकास र सौविध्यताका सपना आफ्ना आँखा भरीभरि सँगालेका छन् जनताले र ती सपना उनीहरू आफ्नो जीवन कालमै सफल भएको देख्न चाहन्छन् । के तपाईँलाई यसमा जस लिएर अमरत्वको अंश ग्रहण गर्न मन लाग्दैन हो ? आगे तपाईँको विचार ।
Published on July 9, 2017 at 10:12 pm
वसन्त पंचमी कथा – निशा खनाल अर्याल
उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुकूल श्रम सम्बन्ध – प्रदीप चापागाईं
षड्यन्त्रको अनेक पाटो- युवराज घिमिरे
अमेरिकामा अझ पनि तेह्र प्रतिशतले इन्टरनेट नै प्रयोग गर्दैनन : पत्याउनै गार्हो ?
नेपाली चलचित्र: सफलता र मौलिकताको बहस
हाराबारासँग बर्बर्ती बर्सिंदा
दुःख आफैँ दुख्ने गर्छ
दक्षिण कोरियाबाट सिक्ने कि ?
प्रवासमा नेपाली पत्रकारिता– नारायण श्रेष्ठ